Na dia misy dikan-teny maimaim-poana aza Maro ireo orinasa mpiantrano, maro ireo orinasa no manararaotra ny fahafaha-manatsara sy ny tolotra serivisy mailaka. Ny mailaka fampiantranoana Profesional dia mitaky mailaka izay tarihan’ny serivisy mailaka na voatokana.
Interserver – 5,00 USD / lună
– 0,99 USD / lună
– manomboka amin’ny 0,80 USD / lună
– manomboka amin’ny 3,99 USD / lună
– manomboka amin’ny 2,95 USD / lună
– manomboka amin’ny 2,96 USD / lună
1 Ahoana nu anaovana ny fampiantranoana E-mail
1.1.1 1 Profesionalism
1.1.2 2-Date de securitate
2.1 1 – Gazduire Voafandrika (Email + Website)
2.2.1 Site web: https://www.namecheap.com Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NumeCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia tamin’ny fanavaozanaza ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa jucărie sehatra anarana ary serivisy fiarovana. Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia $ 0.99 / mo dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra hafa fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny firy mailaka ilainao. Site web: https://www.hostinger.com Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, orice Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Naona inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo. Sampana: Fampiantranoana mailaka an-tserasera sy voatokana. Hafatra fidirana amin’ny alàlan’ny IMAP / POP / Webmail Kaonty mailaka & mandroso tsy voafetra Miaraka amin’ny mpanjifa rehetra Desktop 5. Gazduire TMD Găzduire partajată TMD (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny $ 2.95 / lun. Mpanenjika ny Email Hosting Services TMD
2.3 6. Gazduire A2
3.2 2- Tsindrio "Crea" hanombohana
5.1.1 1- Editor Midira ny Zone
5.2.1 1- Mankanesa orice setări DNS
5.3 Exemple de înregistrări MX
6 Inona no atao hoe hoe SPF Record?
6.1 Eșantion de înregistrări SPF
6.2.1 1 – Mankanesa amin’ny Editor DNS
6.3.1 1- Accesați Setările DNS
Ahoana nu anaovana ny fampiantranoana E-mail
Na dia izany aza, ao anatin’ny sehatra amin’ity lahatsoratra ity isika dia hihevitra fa mijery ny fampiantranoana ny mailakao ianao. Midika aveay fa hifehy tanteraka ny mailakao ianao, amin’ny famoronana adiresy sy fametrahana ny fomba hitantanana azy ireo orice amin’izay misy azy ireo.
Rehefa alefa aminao ny mailaka dia misy ny antsipiriany isan-karazany ao anatin’izany ny adiresy mailaka anao. Miorina amin’ilay adiresy io dia alefa orice amin’ny toerana fitahirizana izay alefitra handefasana azy ilay mail. Rehefa tonga eo izy dia afaka manokatra sy hamaky azy amin’ny fotoana voafidinao.
Raha nividy tranokala fampiantranoana web ianao dia matetika dia azo inoana fa ny tranonkala fampiantranoana mailaka dia miditra ao amin’ny tranonkala hosting. Raha tsy manana ianao dia mila mitady mailaka fampiantranoana mailaka ianao mba hampiasa domenii maimaim-poana amin’ny mailakao.
Jucarie misy adiresy mailaka manokana izao:
Rehefa mampiasa ny mailaka ara-barotra fampiantranoana izay tena resahiko dia mampiasa domenii maoderina ho an’ny mailakao. Misy antony maromaro ahafahana manao aveay manomboka amin’ny fahaiza-manaon’ny profesionalism ho an’ny filaminana. Mamolavola fomba fijerin’ny orinasa, ny fandaniana dia tsy mandrara, ary ny tombony dia mavesatra lavitra noho izany.
Compania A – [mailaka voaaro]
Compania B – [mailaka voaaro]
2-Date de securitate
Amin’ny fampiantranoana ny mailaky ny orinasanao manokana, dia mifehy tanteraka ny fomba fitondràna ny mailaka nalefanao. Ohatra, raha toa ianao ka ao amin’ny orinasa iray misy fitipika sasantsasany jucărie ny toerana, angamba mila mitahiry ny mailaka eo amin’ny serveurs amin’ny toerana manokana.
Ireo orinasa amin’izao fotoana dia mirona amin’ny fifandraisana amin’ny mailaka. Azo inoana fa ny sasany amin’ireo mailaka ireo dia ahitana fampahalalana manan-danja jucărie ny factiora, faktiora, fifanarahana ary ny toy werey. Amin’ny fampiasanao ny fampiantranoana mailaka manokana, dia ho tsara kokoa ianao hiatrehana ireo tranga izay hitranga amin’ny olana an-tserasera.
Ny mailaka foarte na simba dia mety hisy fiantraikany lalina eo amin’ny orinasanao ary ny fanohanana izay miaraka amin’ny fandraisam-peo mailaka fandraharahana dia mety hanaporofo fa sarobidy.
Amin’ny maha-orinasa azy, ny mpanjifanao dia tokony ho afaka manam-pinoana amin’ny fahamendrehan’ny orinasanao. Manolotra anao fampahalalam-baovao izay tsiambaratelo, jucărie ny anarana, adiresy mailaka ary mety amin’ny angona ara-bola mihitsy aza. Ny fiarovana ny mailaka dia zava-dehibe ary tokony hijery ireo fepetra tafiditra ao anatin’izany ny fiarovana ny filaminana, ny anti-malware, ny anti-spam ary ny toy arey amin’ny mailaka mailaka.
Manana adiresy IP lista neagră pentru a promova azo antoka hahitana ny asan’ny orinasa (indrindra fa ny mpanjifa)! Mety ho olana goavana izany satria ny IP anao dia lasa lisitra maintiny dia mitaky fotoana sy ezaka izany mba ahafahana manadio azy indray. Aza avela ho tompon’andraikitra amin’ny mailaka izay manana ny lazany ho an’ny mpanjifanao mahazo lisitra maintimolaly satria mety hiafara amin’ny IP iray ianao ary averina amin’ny lisitra mainty.
1 – Gazduire Voafandrika (Email + Website)
Na izany aza, voafetra ny habaka fampiantranoana ao amin’ny tranonkalan’ny tranonkala ho an’ny tranokalam-pifaneraserana. Ny ankamaroan’ny pachete dia manolotra sehatra iray samihafa izay zaraina eo amin’ny mailaka sy ny tranonkala. Ankoatra ny habaka, mizara ny habetsahan’ny bandwidth natokana ho an’ny kaontinao ianao.
Misy mpandraharaha mpanome tolotra toy ny Google sy Microsoft izay manana mailaka fampiantranoana vahaolana toy ny G Suite sy Microsoft 365 Business. Ireo dia tolotra mailaky ny adiresy izay mora ampiasaina sy matanjaka kanefa mila mitantana samirery avy amin’ny fampiantranoana na dia afaka mampiasa ny anaran’ny anaranao aza izy ireo.
Ny tsy fahafantaran’io dia ny mety ho farany amin’ny fividianana ny tsaratsara kokoa raha ny fitomboan’ny mpiasa. Ohatra, G Suite dia mety mitentina 5,40 USD pentru o fotografie fototra, nu a fost vizin’ny karaman’ny mpampiasa isam-bolana.
Ny InterServer dia miorina ao New Jersey ary efa ho roapolo taona mahery izao – fiainana maharitra mahatalanjona ho an’ny tranonkala iray. Ny voalohany dia nampidirina ho toy ny kaonty fananganana virtoaly virtoaly ny androany dia mandrakotra ny habaka rehetra amin’ny tranonkala fampiantranoana tranonkala.
Na eo amin’ireo mpampiantrano tranonkala mifototra amin’ny tetibola aza dia i NumeCheap no miatrika mora vidy (tsy misy dikany akory) Miaraka amin’ny drafitra fampiantranoana nizara izay ambany hatramin’ny $ 1,44, na dia tamin’ny fanavaozanaza ny sasany amin’ireo vidiny ambany indrindra amin’ny orinasa. Ankoatra ny fampiantranoana, NameCheap dia manolotra vokatra hafa jucărie sehatra anarana ary serivisy fiarovana.
Ankoatry ny drafitra fampiantranoana lozisialy mora vidy, Namecheap dia manana serivisy serivisy misy serivisy fampiantranoana tsy miankina. Raha kely dia $ 0.99 / mo dia afaka mahazo tsy fampiantranoana mailaka ihany fa sehatra hafa fitahirizana rakitra. Miakatra ny vidin’ny miankina amin’ny firy mailaka ilainao.
Ny Hostinger dia miorina ao Kaunas, orice Litoania ary manolotra karazana fampiantranoana isan-karazany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tranonkala fampiantranoana dia ny fahatongavanao miaraka amin’ny mailaka fampiantranoana. Naona inona raha manoratra ianao momba ny drafitra fampiantranoana iombonana na ny VPS hosting, dia nahazo ny mailaka fampiantranoana izy ireo.
Găzduire partajată TMD (izay avy amin’ny serivisy fampiantranoana mailaka) dia manomboka amin’ny $ 2.95 / lun.
SpamExperts mpilalao profil de spam
6. Gazduire A2
Azonao ampidinina n mail mail în amin’ny 25 ao Amin’ny A2 Lite Plan (2,96 USD / lună) nu lahatahiry tsy voafetra ao amin’ny A2 Swift (3,70 USD / lună) în turbo Hosting (7,03 USD / lună).
Fa maninona no mampiantrano mailaka miaraka amin’ny A2 Gazduire:
Mihoatra ny 99.98%
Barracuda Advanced Filtration Spam
Alefaso amin’ny adiresy imailaka 25 miaraka amin’ny tetikasa pachet
Ankehitriny ianao manana lisitr’ireo mpizara fampiantranoana tsara indrindra, foto izao hanamarinana ny fizotry ny fanamboarana.
Midira ao amin’ny kaontinao cPanel ary kitiho ny ‘Email conturi’.
2- Tsindrio "Crea" hanombohana
2.1) Ity faritra ity maneho ny lisitry ny adiresy mailaka efa misy ao amin’ny kaonty mailaka fampiantranoana. Ny adiresy mailaka tsirairay dia tsy maintsy miavaka.
2.2) Tsindrio ny ‘Create’ hanombohana manangana adiresy mailaka vaovao.
3.1) Manorata anarana manokana ho an’ny adiresy imailaka izay noforoninao. Amin’ny ankapobeny dia noforonina mba hampisaintsainana mailaka orinasa manokana toy ny [mailaka voaaro] na amin’ny maha solontenan’ny orinasam-pandraharahana jucărie ny [mailaka voaaro]
3.3) Ampidiro ny avemiafina vaovao tokony hifanaraka amin’io adiresy mailaka io.
Manoro hevitra aho mba hanaraka ny politikan’ny famoronana fiovana maoderina. Izany dia midika fa ny avemiafina dia tokony hampidirina miaraka amin’ny tarehimarika ambony sy ambany ambany miaraka amin’ny tarehintsoratra nomerika sy manokana. Tsara kokoa ho an’ny kaonty tsirairay ny manana avemiafina tokana fa tsy mamerina izany indray mandeha.
Ohatra amin’ireo avemiafina matanjaka;
3.4) Raha tsy afaka mieritreritra ny avemiafina mahery ianao na tsy mahatoky, tsindrio ny bokotra ‘Manomeza’ ary ny rafitra dia hanamarika ny avemiafina mafy ho anao. Ataovy azo antoka fa mahamarika izany ianao!
3.5) Eto dia azonao atao ny mametraka ny habaka fitehirizana izay tokony homena ny kaonty mailaka. Ohatrinona ny toerana apetrakao dia miankina amin’ny isan’ireo kaonty maro tokony hapetraka ary ny habaka azo ampiasaina. Tsarovy fa ny mailaka chiarhitriny dia tonga miaraka amin’ny fanaka lehibe ary mihazakazaka eny amin’ny habakabaka mety hiteraka olana amin’ny fandraisana mailaka vaovao.
3.6) Raha tsy mamorona ity mailaka ity ianao dia tsindrio ity safidy it mba handefa mailaka ho an’ny mpampiasa vaovao. Tadidio fa alefa orice amin’ny kaonty izay noforoninao io mailaka io, ka mbola mila manome ny adiresy mailaka sy ny avemiafina amin’ny mpampiasa mivantana avy amin’ny fomba hafa ianao. Ny mailaka fandraisana an-tsoratra dia mety hanampy amin’ny fizotran’ny dingana vaovao amin’ny mpiara-miasa vaovao.
3.7) Rehefa vita izany dia tsidiho ny bokotra ‘Create’ ary vita ianao!
1.1) Eo amin’ny takelan’ny baoritra exista diand nind ‘Mail’
1.2) Ny rindran-damba eo ankavanana dia hampiseho ny efijery voalaza. Tsindrio eo amin’ny ‘Creare adresă de e-mail’ hanombohana ny dingana fanoratana.
2.1) Mampidira adiresy mailaka tokana ato. Io anarana io dia tsy maintsy miavaka satria ny alàlan’ny mailaka dia tsy mamela ny anarana duplicat amin’ny sehatra iray ihany.
2.2) Io nu domenii nu sunt hampiantranoana ny adiresy mailaka. Raha manana anarana nomena tokana ianao dia tsy mila manova izany ianao. Raha manana mihoatra ny iray ianao, dia tsindrio ny lisitry ny sehatra azonao atao.
2.3) Ampidiro eto ny avemiafina matanjaka. Izany dia midika fa ny avemiafina dia tokony hampidirina miaraka amin’ny tarehimarika ambony sy ambany ambany miaraka amin’ny tarehintsoratra nomerika sy manokana. Tsara kokoa ho an’ny kaonty tsirairay ny manana avemiafina tokana fa tsy mamerina izany indray mandeha.
2.4) Raha tsikaritrao ianao na mbola tsy azonao antoka hoe inona no mahatonga ny avemiafina matanjaka, dia ny fikitihana ‘Generate’ dia hanana rafitra ho anao. Aza adino ny manamarika izany.
2.5) Mampidira indray ny avemiafina indray. Izany no fomba fiasan’ny rafitra hahazoana antoka fa mahatsiaro ny avemiao marina ianao na mamela anao hanamarina izany raha toa ka misy typo iray natao.
2.6) Azonao atao ny misafidy ny hampiasa ny toerana fametrahana ny habaka momba ny sora-baventy na Tenitra na fetra. Raha ny fanamarihan-drakitra, Plesk dia nanolotra ny habaka farafaharatsiny azo avela ho an’ity adiresy mailaka ity. Ny isa dia miova arakaraka ny ambaran’ny mailaka fampiantranoana mpamatsy.
Mail Exchange (MX) firaketana dia karazana firaketana DNS. Nasehon’izy ireo an-tsoratra ny toerana nandefasan’ny mailaka anao. Tsy toy ny adiresy mailaka izay tsy maintsy noforonina isaky ny maniry vaovao ianao dia mila apetraka indray mandeha isaky ny sehatra iray.
Misy Singa Roa amin’ny rakitsoratra MX; Prioritate și destinație.
Destinaţie – Nu este digan-dikan-dikan-drakitry ny anaran’ny sehatra miasa. Amin’ny alalan’ny namana mahafinaritra dia midika izany fa tsy mety adiresy IP izany, fa ny anarana mifandraika amin’io IP io.
1- Editor Midira ny Zone
1.1) Midira ao amin’ny cPanel ary-taratasy mandra-pahatonganao orice amin’ny sehatra ‘Domenii’. Tsindrio eo amin’ny ‘Zone Editor’.
3.2) Mampidira adiresy Destina. Ny mahazatra dia manamarika izany ho mail.yourdomain.com ka manondro fa rakitsoratra MX ho an’ny mpizara mailaka izany. Raha vantany vao vita ianao dia tsindrio ny „Adăugați o înregistrare MX”.
1- Mankanesa orice setări DNS
1.1) Eo amin’ny zoron’ny fikandrana ankavia, kitiho eo amin’ny tranonkala sy sehatra. Eo amin’ny tontonana ankavanana, mandehana omenany amin’ny sehatra tianao te hamorona Record MX ho anao ary tsindrio ny ‘DNS Settings’.
3.2) Mampidira ny anaran’ilay sehatra tianao hamoronana ho an’ny mpizara mailaka. Formatul Ao amin’ny mailserver.domainname.TLD
3.3) Avy amin’ny lisitra fidirana, misafidy ny laharam-pahamehana nomena amin’ity mailaka ity. Tsy mila manamboatra izany ianao raha tsy manana mihoatra ny MX Record ianao. Rehefa vita izany dia tsindrio ny „OK” ary ny rakitra MX dia hatao.
Exemple de înregistrări MX
Exemplu – rakitsoratra MX și un anume WebHostingSecretRevealed.net.
Zava-dehibe mahatsiaro fa ny rakitra MX dia tsy maintsy manondro ny anaran’ny mpampiasa mailaka – fa tsy ny adiresy IP. Ireto misy ohatra sasantsasany amin’ny MX Records marina;
Inona no atao hoe hoe SPF Record?
A Rakitsoratry ny mpandefa politica (SPF) manondro inona ireo mpizara mailaka azon’izy ireo ampiasaina handefasana mailaka ny sehatra misy anao. Amin’ny ankapobeny dia voafaritra ao amin’ny DNS ao amin’ny kaontinao fampiantranoana tranonkala ary voatahiry ho TXT Records.
Ny SPF Record foana amin’ny ‘v =’ izay fampiasa SPF ampiasaina. Ny tena mahazatra dia ny ‘spf1’ ary ankatoavin’ny ankamaroan’ny olona amin’izao fotoana izao. Ny zava-drehetra manaraka ny ‘v =’ indicator dia ny egokitzenipika izay mamaritra ny fampiantranoana na tsy navela hanisy mailaka avy amin’ny sehatra misy anao.
Ampianarina amin’ireo se potrivește cu ireo ny fanovana;
Jucarie Ary famaritana ny hoe:
– pentru eșec
? pentru neutru
Eșantion de înregistrări SPF
v = spf1 dia manondro ny versiunea SPF
1 – Mankanesa amin’ny Editor DNS
2.1) Panoul Ao amin’ny, în principalul Zone Zone Editor, diadome mano anao fotsiny ny fahafahana mamorona na manova karazana rakitra 3; A, CNAME ary MX. Mba hamoronana rakitsoratra TXT momba ny SPF Records dia mila tsindrio ny ‘Manage’ ianao mba hiditra ao amin’ny faritra lehibe.
3.1) Eo amin’ny ilany ankavanan’ny efijery dia misy ny menio fanala izay ahafahanao misafidy ny karazan-tsoratra tianao hotratrarina. Afindrao ny lisitra ary tsindrio ny ‘Add Record TXT’.
3.2) Eo ambanin’ny pejin’ny ‘Records’ dia ahafahanao miditra / mametraka ny famaritana ny rakitra SPF. Rehefa vita izany dia tsindrio ny ‘Adăugați înregistrare’.
1- Accesați Setările DNS
1.1) Ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso ny Plesk, tsindrio ny ‘tranonkala & ny sehatra ‘eo amin’ny lalana hidina ankavia. Eo amin’ny lafiny ankavanan’ny tontonana eo ankaviana amin’ny bokotra ‘Setări DNS’.
2.1) Indray solicita amin’ny faritra Setări DNS pentru a adăuga înregistrare.
Maimaimpoana a venit în Gmail pentru o afacere?
Ny Gmail pentru Afaceri dia ao anatin’ny G Suite an’ny Google. Mampalahelo fa tsy maimaim-poana ny G Suite ary miara-miasa isam-bolana manomboka amin’ny $ 6 / mo / mpampiasa. Misy fe-potoana fanombohana se potriveste cu maapana 14 andro.
Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra tranonkala dia manolotra fampiantranoana mailaka ary tonga jucărie ny fenitra miaraka amin’ny fonosana fampiantranoana tranonkala. Ho solon’izay, azonao atao koa ny mandinika mividy anarana nomena anarana ary mampifangaro izany amin’ny serivisy mailaka toa an’i Gmail.
Ho an’ny orinasa kely kokoa, Hostinger dia manolotra vidiny tsara ho an’ny vola misy ambany amboniny, manomboka amin’ny $ 0.99 / mo.
Ahoana nu fomba hametrahako kaonty mailaka?
Ny fananganana kaonty mailaka dia matetika atao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso fampiantranoana anao. Amin’ny ankapobeny, ny fametrahana kaonty mailaka dia tsotra toy ny famoronana anarana ao amin’ny tontolon’ny fanaraha-maso mailaka, avy eo n fametrahana fetra amin’ny haben’ny kaonty.
Ny fametrahana mailaka ho an’ny orinasa dia mety ho asa mora. Amin’ny tranga maro, eny fa na dia te-hamaha ny olana amin’ny fametrahana MX sy SPF Records ianao dia afaka mangataka fanampiana avy amin’ny mpampiantrano anao. Tadidio fa ireo sehatra izay matetika nu mila mitantana indray cereha.
Ny fananganana kaonty mailaka tsirairay dia mora tsotra ary raha manaraka ny dingana voalaza eto ianao dia tsy tokony hisy olana lehibe. Na izany aza, tadidio fa ny fanohanana tehnolojika dia matetika mailaka fotsiny – izay mitondra ahy any amin’ny teboka farany.